🥇 Yakachengeteka uye Yakavimbika VPN: Vepamusoro gumi VPNs ye10
✅ Yemahara VPN
🥇 MaVPN akanakisa
Nguva imwe neimwe yavari vamwe vashandisi vane hanya nezve kuchengetedzeka kwavo (uye saka vanofarira VPN) nekuda kwekukura kwekutyisidzira kwecyber uye nyaya dzehusori dzakakura dzave kuburitswa kwenhau. Kunyanya munguva dzedenda, apo SARS-CoV-2 inomanikidza vazhinji kutaura parunhare, zvinoreva kubata data rakajeka kana rakavanzika rekambani kubva kunetiweki epamba angave asina matanho ekuchengetedza bhizinesi.
Iyo VPN haingogone kukupa iwe yakawedzera chengetedzo yehofisi yako kana imba yekubatanidza, inogona zvakare kukubatsira nedzimwe nzira. Semuenzaniso, unogona kushandura kwakabva IP yako sezvaunoda, uchikwanisa kusarudza nyika yekwakabva kuti ugone kuwana masevhisi ane mashoma kana anoganhurirwa kunyika yako kwaunobva. Chimwe chinhu chinokwezvawo vashandisi vazhinji, kunyanya kushambadzira zvemukati masevhisi, kuVPN.
Pamusoro gumi VPNs
Pakati pe akanakisa vpn masevhisi Isu tinokurudzira iyi Top10:
Yakachipa premium VPN. Zvimiro zvayo zvakatanhamara ndezvi:
IP's kubva ku59 nyika
6 zvishandiso panguva imwe chete
Mira kunze nekuda kwekusimudzira kwayo
Shanyira webhusaiti yavo
IP's kubva ku90 nyika
7 zvishandiso panguva imwe chete
Inomira kunze kwekuchengeteka kwayo
IP's kubva ku61 nyika
Inomira kunze kwemutengo wayo
IP's kubva ku94 nyika
5 zvishandiso panguva imwe chete
Inomira kunze kwehutano hwayo hwesevhisi
IP's kubva ku74 nyika
Inomira kunze kwayo yemhando-mutengo
IP's kubva ku80 nyika
Inozivikanwa nekumhanya kwayo
IP's kubva ku22 nyika
Inomira kunze kune yayo technical service
Viga Mbongoro Yangu!
IP's kubva ku190 nyika
10 zvishandiso panguva imwe chete
Yakanakira P2P uye Torrent
IP's kubva ku46 nyika
Yakanakira kushandiswa neNetflix
IP's kubva ku56 nyika
Sarudzo yakanaka kumhuri
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve VPN
Usati wahaya VPN unofanira kuziva nhevedzano yezvinyorwa kuti ukwanise kusarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako uye zvakare kuona kana iwe uchinyatsoda VPN sevhisi kana kwete.
Una VPN (Virtual Private Network), kana kuti virtual private network, ibasa rinokubvumira kuti ubatanidze kunetiweki seInternet nenzira yakachengeteka. Kuti uite izvi, kusvibiswa kwekwakabva network traffic kunoshandiswa, inopa IP yakasiyana kubva kune yekutanga yakapihwa neInternet service provider yako (ISP).
Zvakare, VPN ichagadzira "tunnel" yekubatanidza neyakavharidzirwa traffic, kureva kuti, yese inouya uye inobuda data traffic ichadzivirirwa ne encryption algorithm kuitira kuti mapato echitatu asakwanise kuvabata mumagwaro akajeka kuburikidza nekurwiswa vachishandisa sniffers (network packet sniffers) seMitM-mhando yekurwisa (Man in the Middle), uye ichatoramba yakavanzika kubva kune mamwe masevhisi uye vanopa vanogona kutora traffic yako nekuichengeta.
Zvose zviri pamusoro zvine mamwe "side effects". Semuenzaniso, nekushandura IP, ichakubvumirawo iwe pinda zvirimo zvinorambidzwa kana kushomeka munzvimbo yako. Semuenzaniso, zvirokwazvo waedza kuona chiteshi chekufambisa kubva kune imwe nyika uye inokuratidza meseji ichikuzivisa kuti sevhisi iyi inongowanikwa kune vashandisi vanobva munyika iyoyo. Zvakanaka, rudzi urwu rwekurambidzwa runogona kudzivirirwa neVPN…
yemahara vs yakabhadharwa
Kune zvimwe zvachose emahara VPN masevhisi, nemamwe anobhadharwa anopa mashoma masevhisi emahara. Paunofunga kushandisa VPN, imhaka yekuti iwe unoda kuchengetedzwa kwakanyanya kana kuwana kune mamwe masevhisi anodziviswa munharaunda yako. Uye hachisi chinhu chaunofanirwa kupa kune masevhisi emahara.
Chimwe chezvikonzero ndechekuti masevhisi emahara anowanzo kuve nedziviriro yakaderera asi, pamusoro pezvose, nekuti ivo vanazvo traffic limits zuva nezuva, vhiki nevhiki kana pamwedzi. Izvi zvinokudzivirira kuti usakwanise kushandisa zvakanyanya zvemahara uye izvo hazvigoneke pakutepfenyura mavhidhiyo masevhisi anoshandisa data rakawanda (kunyanya kana ari HD kana 4K). Uye zvakatonyanya kuipa, masevhisi emahara eVPN haakubvumidze kushanda nemasevhisi ekutepfenyura muzviitiko zvakawanda.
Naizvozvo, kana iwe ukawana imwe yemahara VPN masevhisi unozopedzisira waora moyo uye kuguma mubasa rinobhadharwa nekusawana zvawaida chaizvo. Pamusoro pezvo, masevhisi anobhadharwa haafanire kunge achidhura, kure nazvo, kune zvinopihwa zvine muto zvekuti kwemaeuro mashoma pamwedzi zvinokubvumidza iwe kuve neprimiyamu masevhisi.
Yedu yatinofarira VPNs
Kubva3, € 10
Kubva2, € 75
Kubva1, € 79
Uye rangarira zvavanotaura, kana chimwe chinhu chakasununguka, chigadzirwa ndiwe. Ndokunge, mamwe masevhisi emahara ari kuzotarisa chiitiko chako uye anogona kuchishandisa kuchitengesa kune vechitatu mapato, kuratidza ads zvinoenderana nezvaunofarira, kana kuwana imwe mhando yehupfumi yekudzoka kwayo. Naizvozvo, vanopa sevhisi yemahara, asi vari kuita purofiti kune rimwe divi…
Mamwe masevhisi anogona tengesa bandwidth kune vamwe vatengi vebasa rako rekubhadhara. Ndiko kuti, ivo vanoshandisa chikamu chezviwanikwa zvako kuti uzvitumire kune vashandisi vane premium account.
Ichokwadi kuti unogona gadzira yako VPN Using sevha ine GNU/Linux uye OpenVPN (kana mamwe masisitimu anoshanda uye software yakafanana). Asi rudzi urwu rweVPN ruchave rwakanyanya kushomeka maererano nekumhanya netiweki bandwidth yako uye uchafanirwa kuita kuomesera uye kutonga iwe pachako, uye izvo zvinosanganisirawo kubata nehunyanzvi matambudziko angamuka pane server.
Iyi haisi sarudzo yeruzhinji rwevashandisi, kwete kunyangwe kune vazhinji vashandisi vehunyanzvi. Naizvozvo, iyo yakanyanya kugadzikana kondirana neyechitatu bato VPN sevhisi uye unakirwe nekunyaradza kwainopa. Muchiitiko ichi, iwe unozongonetseka nezve kuisa mutengi uye kutanga kunakidzwa nebasa kubva pazuva rekutanga.
Iri isarudzo yakanaka kutenga VPN router?
Ichokwadi kuti kunewo mamwe ma routers, kana ma routers, ayo vanopa VPN yatobatanidzwa. Iwo ma premium ma routers anowanzo kudhura zvishoma kupfuura avhareji, asi ivo vanopa akatevedzana anonakidza mabhenefiti uye mamwe masevhisi. Semuenzaniso, unogona kuwana mimwe mienzaniso yakadai se:
Kunyangwe iri sarudzo huru mune dzimwe nguva, Unofanira kungwarira nemamwe akachipa VPN router modhi. Mamwe acho anoratidza kuti vane rudzi urwu rwesevhisi asi rinongoreva kune mutengi, uye ivo vanoshaya sevhisi inopihwa neserver. Naizvozvo, iwe zvakare uchafanirwa kuhaya yechitatu-bato sevhisi kuti iite kushanda.
Kuti urege kuve nematambudziko, takaita mubatanidzwa weakanakisa VPN ma routers aunogona kuwana nekudzvanya bhatani rinotevera:
Ona VPN Routers
Chenjerera izvi! Vazhinji vanotenga imwe yeaya marouters uye vane rugare rwepfungwa, asi data ravo harina kudzivirirwa.
Zvakanakira kushandisa VPN
Kufanana nechimwe chigadzirwa uye sevhisi, VPN ine zvayakanakira nezvayakaipira. Asi chokwadi mabhenefiti ane simba rakawanda kukukurudzira kuti umuhaye:
Encryption yetiweki traffic kuitira kuti data rako risafambiswe mumavara akajeka uye kuremekedza kuvanzika (ruzivo rwunotamiswa pakati peanotumira neanotambira harugone kuwanikwa nevechitatu mapato pasina mvumo). Uye izvo zvinosanganisira traffic yese mukuzara kwayo, uye kwete semaseva eproxy aunogona kugadzirira yewebhu browser kana mamwe chaiwo maapplication. Muchiitiko ichi, traffic yese kubva kumidziyo yako inochengetedzwa.
Kuvanzika kukuru uye kusazivikanwa. Kwete chete encryption, asiwo yekuvanza kwakabva IP.
Bypass zvirambidzo zvenzvimbo yako yenzvimbo kushandisa IP kubva kune dzimwe nyika iyo iyo sevhisi inoshanda pasina miganhu.
Wako Internet mupi kana ISP (Telefónica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone,…) haugone kuziva mashandisiro aunoita yekubatanidza kwako. Pasina VPN ichakwanisa kuziva mapeji aunoshanyira, kana iwe ukarodha zvemukati pirated, nezvimwe. Izvi zvakadaro sezvo traffic yese ichapfuura nemaseva avo uye rekodhi yazvo icharamba iripo. Pamusoro pezvo, mutemo unoda kuti ISP ichengete data rakadaro kwemakore akati wandei. Yese iyi data inogona kutengeswa kana kuendeswa kumakambani ekushambadzira, masangano ehurumende, nezvimwe.
data kuperera, zvekuti kana vasvika kwavaienda ndivo vaye vakabva kwavabva. Kureva kuti havana kuchinjwa munzira.
VPN iri nyore, uye dzimwe nguva inongosanganisira kudzvanya bhatani kuti utange kana kuimisa. Pane kudaro, mamwe masevhisi akadai semaseva eproxy, uye mamwe matanho ekuchengetedza akasiyana, anogona kureva kuomarara.
Savings. Kunyangwe iine mutengo, yakaderera zvakanyanya kupfuura yemamwe masevhisi kana kubhadhara kune vezvekuchengetedza nyanzvi vanogona kuchengetedza network.
Chokwadi VPN haina Pfungwa dzakaipa zvinoshamisa zvikuru. Mapoinzi maviri chete anogona kujekeswa anopesana nazvo:
Mutengo: Kunyange zvazvo kune vakasununguka, ndakatotaura kuti havasi ivo vakanyanya kukodzera. Naizvozvo, kuti uve neVPN yakanaka unofanirwa kubhadhara. Zvisinei, haisi mitengo yakakwirira uye inobvumirwa kuvanhu vakawanda. Ne router ine VPN unogona zvakare kudzivirira idzi mubhadharo…
Speed ​​yekubatanidza: Zviripachena, kana uchinyorera iyo data, inofanirwa kuvharirwa uye kudhindwa kuitira kuti iwe uione sekunge iwe hauna VPN. Ndokunge, kunyangwe zviri pachena kwauri, asi izvo zvinofungidzira mumwe mutoro unoderedza kumhanya. Kana uine ADSL yekukurumidza, fiber optic, kana 4G/5G mutsara, hazvizove zvakanyanya dambudziko. Zvinogona kungokuvadza zvakanyanya kune zvinononoka kubatanidza (kana kana uine imwe mhando yedata remuganho uye zvinokunonokera iwe kwemwedzi wese).
Iwe unofanirwa kuongorora kana kuve neVPN kune chero pfungwa mune yako imwe nyaya. Muchidimbu, nekuda kwekuvanzika uye zvikonzero zvekuchengetedza chete, zvakakosha. Muchokwadi, kuvanzika ikodzero pane network iri kutyorwa zuva rega rega nemakambani makuru. NeVPN iwe unogona kuisa mhinduro kune izvi. Asi zvisinei neizvi, kunewo zvimwe zvikonzero nei uchida VPN:
SARS-CoV-2: Denda iri rashandura nzanga uye rachinja maitiro ekuita nenzira dzakawanda, zvakare munzvimbo yebasa. Ikozvino kune akawanda mamwe makambani uye freelancers teleworking. Izvi zvinosanganisira kushandisa zvishandiso zvako kubatanidza (ona BYOD) uye network yako yekumba. Makambani mazhinji anobata data remutengi rinonzwisiswa (mutero data, mapikicha epachivande, ruzivo rwakachengetedzwa nenjere pfuma, data yekurapa,…) uye pasina VPN vanozove panjodzi yekuburitswa kana kubvumwa nevechitatu mapato asina mvumo.
Chengetedza data rako rekubhurawuza: NeVPN iwe une imwe nhanho yekudzivirira sezvandakataura mune yapfuura poindi. Izvi zvinonyanya kukosha kana iwe ukashandisa veruzhinji kana kusachengeteka WiFi yekubatanidza kuwana mamwe masevhisi ekubhanga, nezvimwewo, pasina vamwe kukwanisa kubata mapassword uye mamwe marudzi ezvitupa kana data rakaiswa.
Bypass internet censorship: Kana ukasangana nesevhisi kana app isingawanikwe munharaunda yako, ine VPN unogona kuiwana nekutora IP kubva kune imwe nyika. Izvi zvinogona kunyatsoshanda kuona mamwe machaneti epamhepo, kuwana zvirimo zvisingawanikwe pane mamwe mapuratifomu ekutepfenyura (AppleTV, Netflix, Disney +, F1 TV Pro,...), uye kunyangwe kune mamwe maapplication anorambidzwa paGoogle Play, App Store, etc. etc.
P2P uye Torrent Downloads: kudhawunirodha zvirimo neTorrent kana P2P network, pakati pemamwe mawebhusaiti kurodha pirated kana zvisiri pamutemo zvemukati, unogona kuvimba neVPN kuti iite nenzira isingazivikanwe uye kuti ISP haigone kuziva nezve chiitiko ichi. Kunyangwe izvi zvisiri pamutemo uye uchazviita nenjodzi yako…
Sezvauri kuona, maapplication eVPN anoenda kupfuura kuchengeteka kuri nyore...
Chii chandinofanira kuziva kuti ndisarudze yakanakisa VPN?
Kune zvimwe technical details iwe unofanirwa kugara wakatarisa kunyanya paunenge uchienzanisa mamwe masevhisi eVPN pakati pausina chokwadi. Ivo vanogona kuve chiratidzo chakanaka chekuona kunaka kwesevhisi uye kana inokodzera zvirinani zvaunoda.
Nhamba yemaseva uye IP
NordVPN AES-256 Kurumidza Kubva 59 nyika 6 panguva imwe chete Promotions
CyberGhost AES-256 Kurumidza Kubva 90 nyika 7 panguva imwe chete Chengetedzo
Surfshark AES-256 Kurumidza Kubva 61 nyika Unlimited Mutengo
ExpressVPN AES-256 Zvaive zvakanaka kwazvo Kubva 94 nyika 5 panguva imwe chete Hunhu hwekushumirwa
ZenMate AES-256 Zvaive zvakanaka kwazvo Kubva 74 nyika Unlimited
Hotspot Shield AES-256 Kurumidza Kubva 80 nyika 5 zvigadzirwa Speed
TunnelBear AES-256 Zvaive zvakanaka kwazvo Kubva 22 nyika 5 zvigadzirwa Basa rehunyanzvi
Viga Mbongoro Yangu! AES-256 Kurumidza Kubva 190 nyika 10 panguva imwe chete Yakanakira P2P uye Torrent downloads
ProtonVPN AES-256 Zvaive zvakanaka kwazvo Kubva 46 nyika 10 panguva imwe chete Yakanakira kushandiswa neNetflix
PrivateVPN AES-256 Zvaive zvakanaka kwazvo Kubva 56 nyika 6 panguva imwe chete Sarudzo yakanaka kumhuri
Mamwe masevhisi eVPN ane nhamba huru yemaseva akapararira munyika dzakawanda, inova mukana wakajeka. Mukuwedzera, vamwe vanokupa iwe a Yakasiyana IP zvingoitika, asi mamwe masevhisi anoenda mberi uye akusiye iwe usarudze kwakabva kwakataurwa IP.
Izvi zvinonakidza kwazvo kune masevhisi akaganhurirwa kana zvirimo. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unoda kuwana sevhisi inongowanikwa muSweden. Neimwe yeaya maVPN unogona kuwana IP yeSweden uye nekudaro kuwana sekunge iwe uri mumwe weSweden ...
Ndiyo imwe ye data yakakosha kune kuchengetedzeka kubva kubasa. Inogonawo kukanganisa kushanda. Zviripachena, iyo yakanyanya kuchengetedzeka iyo yakanyanya kukurumidza kukurumidza iwe yaunorasikirwa, kunyangwe mamwe emhando VPN masevhisi akakwanisa kuburikidza nehumwe matekinoroji kuitira kuti hazvisizvo uye ivo vanogona kupa yakanakisa kumhanya uye chengetedzo.
Pese paunosarudza VPN, iwe unofanirwa kusarudza imwe ine yakasimba encryption algorithm iyo isina inozivikanwa njodzi. Imwe yacho algorithms ndeye AES-256inova sarudzo huru. Muchokwadi, masevhisi mazhinji ekubhadhara anosarudza kuchengetedzwa kwegiredhi remauto, iri pakati peakanyanya kuwanikwa.
Pamusoro pe encryption, mamwe masevhisi ekubhadhara ane mamwe ekudzivirira tekinoroji kana zviyero zvevatengi vavo. Asi ngazvive izvo, dzivisa kusachengeteka algorithms seSHA-1, MD4, uye MD5 izvo zvakatyorwa.
Uye rangarira, hapana 100% yakachengeteka system. Chinhu chine ngozi zvikuru kutenda kuti haubatwe. Kutaura zvazviri, vamwe cybercriminals Vakakwanisa kutyora hukama uhu nekutora mukana weimwe mhando yekusagadzikana kana dzimwe nzira dzechitsotsi dzakadai sekuba kiyi.
Ndiyo imwe yeakanyanya kukosha data kana iwe usingadi kuti VPN idzvinyirire yako kumhanya kweneti nenzira yakakura. Naizvozvo, iwe unofanirwa kusarudza masevhisi nekumhanya kwakanaka. Mazhinji masevhisi emazuva ano anopa masevhisi ane kumhanya kwakaringana, saka hazvizove zvakanyanya dambudziko, kunyanya kana ukashandisa kukurumidza kubatana (ADSL, fiber optics,...).
Ini handisi kutaura kunetiweki pachayo, asi kune iyo data iyo VPN sevhisi inopa pachayo inogona kuchengeta. Sezvandambotaura, iyo data haizopfuura nemaseva eISP, asi ichapfuura nepakati peiyo VPN mupi.
Vamwe vevanopa chengetedza log data senge zita rako, mari yekubhadhara, yako chaiyo IP, nezvimwe. Data inogona kubatsira kukuziva iwe. Izvo zvinokurudzirwa, saka iwe unofanirwa kuverenga iyo yakadhindwa kuti kana vapei ava vanochengeta iyi data. Ngwarira avo vanoachengeta uye nguva dzose sarudza anochengeta zvinyorwa zvishoma.
Mamwe emahara VPN masevhisi anoshaya hunyanzvi kana basa revatengi kana kuti murombo. Panyaya yebasa rekubhadhara, izvi zvinowanzova nani uye 24/7 (maawa makumi maviri nemana nemazuva manomwe pasvondo), asi hazvina kufanana mune zvese.
Mamwe masevhisi anopa kutarisa chete in Shona, vamwe vachavawo naro muchiSpanish. Vanowanzo kuve vari vaviri nekufona uye neemail, uye vamwe vanotova nechat chat yekupindura mibvunzo yako kana kugadzirisa matambudziko angangomuka.
Tsigiro kana mapuratifomu
Yemahara VPN masevhisi ane yakati tsigiro shoma, asi mazhinji evakabhadharwa ane rutsigiro rwakakura maererano nemapuratifomu anotsigirwa. Aya masevhisi ane zvirongwa zvevatengi zvinogona kuiswa pane akasiyana masisitimu anoshanda senge Windows, macOS, Linux, Android, iOS, nezvimwewo. Vamwe vanotobvumira kuti zviitwe pane mamwe maTV akangwara uye mumabhurawuza kuburikidza nemaadd-ons.
Tarisa zvakanaka rudzi rwemashandisirwo ehurongwa aunoshandisa kumba kana kubasa uye gara uchisarudza mupi weVPN anogona kukupa iwe. official client inotsigirwa.
Avo vatengi vandiri kutaura nezvavo muchikamu chakapfuura vane graphical interface inogona kuva yakawanda kana kushoma hushamwari. Iwo anowanzo ari akapusa uye haudi chero hunyanzvi hwekombuta kuvhura nekudzima VPN kana kuita mamwe marongero pairi.
Kazhinji zviri nyore sekumhanyisa VPN mutengi uye Dzvanya bhatani kuitira kuti sevhisi ishandiswe uye inotanga kuita "mashiripiti" ayo.
Mune akabhadharwa VPN masevhisi unogona kuwana nzira dzinoverengeka dzekubhadhara kuzvinyoresa. Idzi nzira dzekubhadhara dzinogona kuve dzakawanda:
Kadhi rechikwereti: Iyo yakasununguka uye yakajairika kune vazhinji vashandisi.
PayPal: mamwe mapuratifomu anobvumawo kubhadhara kuburikidza nepuratifomu iyi yakachengeteka kwaunongoda email yako chete.
App Store: Mamwe maVPN emapuratifomu enhare anobvumira kubhadhara kuburikidza nemasevhisi ekubhadhara ezvitoro zvemaapplication emapuratifomu enhare, seGoogle Play, App Store, nezvimwe.
Cryptocurrencies: cryptocurrencies inobvumira kubhadhara kusingazivikanwe zvachose, senge zvakaitwa neBitcoin. Vazhinji vanopa VPN vanotsigira rudzi urwu rwekubhadhara cryptocurrency.
vamwe: Mamwe anotsigirawo dzimwe nzira dzakasiyana.
Pamwe izwi haritauri bhero DMCA, asi ishoko rinoreva mutemo wekuchengetedzwa kwekodzero wekuUnited States. Mutemo uyu unodzivirira marudzi ese ezvinyorwa zvakaita semabhaisikopo, mimhanzi, software, mabhuku, nezvimwe kubva mukubiwa.
Uye izvi zvinei nechekuita neVPN? Zvakanaka zviri nyore, vamwe vanopa VPN vane dzimbahwe ravo munyika dzine mitemo isingafungi kupindura zvikumbiro kubva kuUnited States kana chimwe chiitiko chehutsotsi chaitwa. Kureva kuti vari mukati nzvimbo dzepamutemo izvo zvinodzivirira vatengi vavo kana data yakakumbirwa kutongwa.
Asi haasi ese masevhisi eVPN anoshanda kubva kurudzi urwu rweparadhiso kunze kwemitemo iyi, mamwe ari munharaunda yavanoita Zvikumbiro izvozvo zvichagamuchirwa.. Saka kana iwe ukashandisa VPN yako kune zviitiko zvehutsotsi, iwe unofanirwa kuterera kune izvi. Nekudaro, kubva pane ino blog hatikurudzire kushandiswa kwechitsotsi…
1 Pamusoro gumi VPNs
2.0.0.1 Mira kunze nekuda kwekusimudzira kwayo
3.0.0.1 Inomira kunze kwekuchengeteka kwayo
4.0.0.1 Inomira kunze kwemutengo wayo
5.0.0.1 Inomira kunze kwehutano hwayo hwesevhisi
6.0.0.1 Inomira kunze kwayo yemhando-mutengo
7.0.0.1 Inozivikanwa nekumhanya kwayo
8.0.0.1 Inomira kunze kune yayo technical service
9 Viga Mbongoro Yangu!
9.0.0.1 Yakanakira P2P uye Torrent
10.0.0.1 Yakanakira kushandiswa neNetflix
11.0.0.1 Sarudzo yakanaka kumhuri
12 Zvese zvaunoda kuti uzive nezve VPN
12.1 Chii chinonzi VPN?
12.2 yemahara vs yakabhadharwa
13 Yedu yatinofarira VPNs
13.1 Chechitatu-bato VPN kana yako?
13.2 Iri isarudzo yakanaka kutenga VPN router?
13.3 Zvakanakira kushandisa VPN
13.4 Zvakaipa zveVPN
13.5 Sei ndichida VPN?
14.0.0.1 Mira kunze nekuda kwekusimudzira kwayo
15 Chii chandinofanira kuziva kuti ndisarudze yakanakisa VPN?
15.0.5 Mhoro VPN
15.0.12 Bata VPN
15.1 Nhamba yemaseva uye IP
15.4 Kuvanzika uye kusazivikanwa
15.5 tsigiro yehunyanzvi
15.6 Tsigiro kana mapuratifomu
15.7 Shamwari GUI
15.8 Nzira dzokubhadhara
15.9 DMCA inokumbira